၁၉၆၂ ပုံနှိပ် အက်ဥပဒေဖြင့် သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့်ပြု | ဧရာဝတီ
၁၉၆၂ ပုံနှိပ် အက်ဥပဒေဖြင့် သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့်ပြု
သာလွန်ဇောင်းထက်| December 28, 2012 | Hits:4,402
| | ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်အရောင်းဆိုင် တဆိုင် (ဓာတ်ပုံ – မေစစ်ပိုင် / ဧရာဝတီ)
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ ထုတ်ဝေခွင့်ပြုမည် ဖြစ်သော်လည်း ၁၉၆၂ ပုံနှိပ်အက်ဥပဒေဖြင့် ထုတ်ဝေခွင့် လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ သက်တမ်း တိုးမပေးခြင်း စသည့် ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်များကို ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်အက်ဥပဒေဖြင့် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး သတင်းစာများ ထုတ်ဝေခွင့်လိုင်စင်ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထုတ်ဝေခွင့် လိုင်စင်မရှိဘဲ သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့် မရနိုင်ကြောင်း၊ ထုတ်ဝေခွင့်လိုင်စင်ကို တနှစ်တခါ သက်တမ်းတိုးရမည် ဖြစ်သော်လည်း ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်မှုများ ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ မီဒီယာ ဥပဒေအသစ် ထွက်ရှိလာပါကလည်း ပုံနှိပ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ သီးခြား ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဥပဒေဖြင့်ပင် သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်များ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေချိုးဖောက်ပါက ထုတ်ဝေခွင့် လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ သက်တမ်း တိုးမပေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ပုံနှိပ်နှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးရဲတင့်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“၁၉၆၂ ပုံနှိပ် အက်ဥပဒေအရ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေကို ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်။ Press Law အသစ်ထွက်လာလည်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေဆိုတာ သပ်သပ် လာမှာပဲလေ။ ပုံနှိပ်နဲ့ ထုတ်ဝေသူ မှတ်ပုံတင်က သပ်သပ် ရှိနေမယ်လေ။ ဥပဒေတော့ မထွက်သေးဘူး။ ဥပဒေထွက်လာတဲ့အခါ ဥပဒေ ချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင် ထုတ်ဝေခွင့် လိုင်စင်ပိတ်တာ၊ သက်တမ်း တိုးမပေးတာတွေတော့ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ကျနော်တို့က လွတ်လပ်ခွင့်တော့ ပေးတာပေါ့။ သို့သော်လည်းပဲ ချိုးဖောက်တယ် ဆိုရင်တော့ အရေးယူတဲ့အပိုင်းက ပါမယ်ထင်တယ်။ ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင် ချိုးဖောက်တယ် ဆိုတာကလည်း ဥပဒေ ထွက်လာမှပဲ သိမယ်။ လက်ရှိအနေအထားအတိုင်းက မှတ်ပုံတင်ဥပဒေဆိုတာ ရှိရင် ပယ်ဖျက်တာက ရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ
အရင်လို ကျနော်တို့က စိစစ်တာတွေ၊ ပြဿနာ ရှာတာတွေ ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ကစပြီး Action ယူတာမျိုးတွေက ရှိကောင်းမှ ရှိနိုင်တာပေါ့” ဟု ဦးရဲတင့်က ဆိုသည်။
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ စာပေစိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနကို မူပိုင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနဟု တရားဝင်အမည်ပြောင်းလဲပြီး လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိကြောင်း၊ နေ့စဉ်ထုတ် ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာများအနေဖြင့် မိမိတာဝန်မိမိယူပြီး ထုတ်ဝေရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
“အရင်လို ကျနော်တို့က စိစစ်တာတွေ၊ ပြဿနာရှာတာတွေ ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့က စပြီး Action ယူတာမျိုးတွေက ရှိကောင်းမှ ရှိနိုင်တာပေါ့လေ။ အဓိက ကြုံတွေ့ရမှာတော့ လွတ်လွပ်လပ်လပ် လုပ်ပြီး တာဝန်ယူတဲ့ စနစ်နဲ့ပဲ သွားရမှာပဲ” ဟု ဦးရဲတင့်က ပြောသည်။
အစိုးရက ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ် အက်ဥပဒေဖြင့် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများ ထုတ်ဝေခွင့် ပြုမည့်အပေါ် ပြည်တွင်း သတင်းစာဆရာများ အကြား စိုးရိမ်မှုများ ပေါ်ပေါက်နေပြီး ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားသော
သတင်းမီဒီယာ ပုံစံသစ် ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းနေကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာများအသင်း ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်သူ Open News
ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးသီဟစောက သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့်ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ် အက်ဥပေဒတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် လိုင်စင်စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်းသည် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆက်လက် ထိန်းချုပ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်ကို ပေါ်လွင်စေကြောင်း၊ ၎င်း အနေဖြင့် သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့် လျှောက်ထားမည် မဟုတ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့်လိုင်စင်ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ရုပ်သိမ်းခွင့်၊ ပိတ်သိမ်းခွင့် ရှိတယ်ဆိုကတည်းက သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀မရှိဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်စေတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့ တနှစ်တခါ သက်တမ်း တိုးစရာမလိုဘဲ တသက်လုံး ထုတ်လို့ရတဲ့ စနစ်မျိုးပဲ ကျင့်သုံးတာ။ အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်း အဲဒီစနစ်ပဲသုံးတယ်၊ မလေးရှားတောင် ဒီနှစ်ကစပြီး လိုင်စင်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး သက်တမ်း တိုးစရာမလိုတဲ့ မှတ်ပုံတင်စနစ်နဲ့ သွားနေပြီ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ဆက်ပြီးထိန်းတာပဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
Messenger သတင်းဂျာနယ်၏ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုအောင်ပေါ်ထွန်းကမူ သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့် ပြုခြင်းအပေါ် ကြိုဆိုသော်လည်း သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရှိမရှိ ဆက်လက် စောင့်ကြည့်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ Messenger ဂျာနယ်အနေဖြင့် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ ထုတ်ဝေသွားရန်ရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားကတည်းက ကြိုပြင်ထားတယ်။ သတင်းစာ ထုတ်ခွင့်ပြုတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ အခုပြောလို့ မဖြစ်ဘူးထင်ပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးဖေမြင့်ကလည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် သတင်းစာထုတ်ဝေရန် လတ်တလော အစီအစဉ် မရှိသေးကြောင်း၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ ရရှိမှု၊ မရရှိမှုသည် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့် လိုင်စင် ချထားပေးသည့် ပုံစံပေါ်တွင် မူတည်နေကြောင်း သုံးသပ်သည်။
“သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့် ချပေးတဲ့နေရာမှာ ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ထုတ်ဝေခွင့် လျှောက်ထားသူတိုင်းကို ခွင့်ပြုတယ် ဆိုရင်တော့
သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် တော်တော်များများရပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်” ဟု ဦးဖေမြင့်က ရှင်းပြသည်။
နေ့စဉ်ထုတ် ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ ထုတ်ဝေလိုသူများ အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
မြန်မာသတင်းစာများ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြန်ကြားရေးနှင့် စာနယ်ဇင်းကောင်စီ နားလည်မှု ယူနာမည်ရှိပြီး သတင်းစာများမှလွဲ၍ ကျန်သတင်းစာ ဈေးကွက် မန္တလေးတွင် အေးနေပုဂ္ဂလိကနေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း မြန်မာပြည်တွင် စရောင်းပြီ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
6 Responses	LeaveaReply Cancel reply
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Truth December 28, 2012 - 11:24 pm	http://burmese.rohingyablogger.com/2012/12/blog-post_17.html
ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်တို့အား စိန်ခေါ်ခြင်း | ဌေးလွင်ဦး f
Monday, December 17, 2012 ဌေးလွင်ဦး No comments ၂၀၁၂- ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်
ရခိုင်နယ်သည် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် နှစ်ပေါင်း လေးထောင်သော သမိုင်းဖြင့် တည်ရှိခဲ့၏။ ထိုကာလသည် ဗမာအင်ပါယာ (ပုဂံအင်ပါယာ) မပေါ်ပေါက်မှီ နှစ်ပေါင်း သုံးထောင်ကျော် ပိုမိုရှေးကျ၍ ဖြစ်၏။ ရခိုင်၏ နှစ်ပေါင်း လေးထောင်ကျော်သော သမိုင်းတွင်- ရခိုင်နယ်၌ ရှိနေသော မည်သည့်လူမျိုးစုက မူလဇစ်မြစ် လူမျိုး ဖြစ်သနည်း။ မည်သည့်လူမျိုးက နှောင်းပိုင်းမှ ၀င်ရောက်လာသော လူမျိုးဖြစ်သနည်း-၊ ဆိုသည်တို့အား ပထ၀ီ သဘာဝအရလည်းကောင်း၊ သမိုင်းလက်ရာ အထောက်အထားများအရ လည်းကောင်း၊ ရခိုင်စာပေဇစ်မြစ် အရ လည်းကောင်း၊ ရခိုင်တို့၏ ရုပ်ရည်ဟန်ပန်အရလည်းကောင်း၊ သမိုင်းစာပေအထောက်အထားအရ လည်း ကောင်း- ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်ဟု ခံယူထားသော ဒေါက်တာအေးချမ်းအပါအ၀င်- အခြားမည်သည့် သမိုင်းပညာ ရှင်များနှင့် မဆို ကမ္ဘာသိ မီဒီယာများ ရှေ့မှောက်၌ နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး Debate လုပ်ဆွေးနွေးလျှက် အဖြေဖေါ်ထုတ်လိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ရခိုင်နယ်၏ ရှေးဦးမူလ လူမျိုးမှာ ယခုအခါ မိမိကိုယ်မိမိ “ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး”ဟု ခံယူထားသူများ သာ ဖြစ်ကြောင်း-၊ ကမ္ဘာ့မီဒီယာများရှေ့တွင် သက်သေသက်ကန် အတိအကျ ဖေါ်ထုတ်ပြသွား ဖြစ်သည်။ မျိုးဆက် သုံးဆက်ခန့် သမိုင်းကို လိမ်လည်၍ တင်ပြခဲ့ခြင်းကြောင့် အထင်မှား အမြင်မှား- သမိုင်းမှားများ၏ ၀ဲသြဃအတွင်း ရောက်နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား အပေါင်းတို့အားလည်း သမိုင်း၏မှန်၏ တန်ဘိုး၊ သမိုင်းမှန်၏ ဇစ်မြစ်တို့အား ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ပေးရာ ရောက်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။
“ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသည်မှာ နောက်ပိုင်းတွင်မှ လုပ်ကြံဖန်တီးခြင်း ဖြစ်၏၊ ထိုရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများမှာ ကိုလိုနီခေတ် အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ခေါ်ယူလာသော လယ်လုပ်ကျေးကျွန်များသာ ဖြစ်၍၊ ၁၈၂၄ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင်မှ ရခိုင်နယ်ထဲသို့ ရောက်လာသူများ ဖြစ်၏- ဟု ရခိုင်သမိုင်းအား လိမ်လည်တင်ပြထားသော၊ သို့မဟုတ် မိမိ လက်လှမ်းမှီသလောက်ကို အခြေခံကာ အမှန်ဟု ခံယူ တင်ပြထားသော- သမိုင်းပညာရှင်ခံထားသော ပညာရှင် တို့ အနေဖြင့်-၊ မိမိဘ၀တာ မကုန်ဆုံးမှီ-၊ ပညာရှင်ပီပီ၊ ယောကျားပီပီ၊ သူရဲကောင်းပီပီ၊ ရခိုင်နယ်အား ချစ်မြတ် နိုးသူ ပီပီ ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက ပြင်ဆင်နိုင်ရန်လည်း ကျွန်ုပ်ဘက်မှ ရည်ရွယ်သည်။
အထူးသဖြင့် ခေတ်သစ် ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင် ဟု ခံယူထားသော၊ ဒေါက်တာ အေးချမ်း ဖြင့် အဓိက ဆွေးနွေး လိုသည်။ ဒေါက်တာ အေးချမ်းအနေဖြင့် သွားရေးလာရေး ခက်ခဲသော်-၊ ကျွန်ုပ်မှ ဒေါက်တာအေးချမ်း နေထိုင် သည့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လာရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်းလည်း ကမ်းလှမ်းလိုသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ရခိုင်လူမျိုး စစ်စစ်ဖြစ်၍ (ဆွေးနွေးရန် တောင်းဆိုမှုအား လက်ခံလျှင် ရခိုင်လူမျိုး စစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား ပြ ပေးပါမည်၊)- ရခိုင်နယ်မှ ညီအစ်ကို တိုင်းရင်းသားချင်းကြား- အိုးမဲသုတ် ခွပ်ခိုင်းထားသည့် သမိုင်းမှားအား ချေ ဖျက်လိုသော ဆန္ဒသန့်သန့်ဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
BA (မြန်မာစာ- ရန်ကုန်)၊ AA (Media Marketing, NY USA),
Scholar of Buddhism, Christianity & Islam ဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှု တာဝန်ခံ
မြန်မာမွတ်ဆလင် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့
Reply	Shwe Yoe December 29, 2012 - 11:11 am	Fabricated history. The muslims put many false video records on you tube about the Bengali in Arakan. This person is now trying to claim Arakan that these illegal people are the real owners of the land. The influx of the Bengali into started after 1988. In the time of Ne Win, there were Bengali people in western part of Arakan but the population grew up in recent decades. These people make themselves more hateful.
Reply	swe htwe December 31, 2012 - 6:49 pm	I agree to you,shwe yoe. This muslim man’s intention is very dirty. But the truth can’t be hidden. We all know that bengalis are illegal immigrants.
Reply	Tayoke December 29, 2012 - 11:52 pm	Debate? Do you know the word “SHAME”? Shamelessly you talk about debate. For what? British colonial administration brought some khuataw kala(Bengali) into Arakan. In Ne Win’s era, many Bengali sneaked into Arakan. In Than Shwe’s time, more Bengali sneaked into Arakan. Bengali invasion happened mostly in the time of military dictatorship. Corruption and mismanagement contributed all these messes. Kala people are dirty. They urinate everywhere, they poop everywhere. They ruin the neighborhood. They steal. They rob. They cheat. The only solution is to kick them out of Arakan. Or sending them to Naypyidaw to let them stay with Thein Sein and his family.
Reply	pps၁၂၃၄၅ December 29, 2012 - 12:32 am	ရှက်ဖို့ကောင်း တယ်ကွာ။ ပြည်သူတွေ ဆီက သိမ်းထားခဲ့တဲ့ အခွင့် အရေး တွေ ကို တောင် အကုန်ပြန်မပေး နိ်ုင်ဘူးတဲ့၊ မဲခိုးပြီး နိုင်တဲ့ ပြည်သူ့ကို လိမ်ထားတဲ့ အစိုးရက။
Reply	Salai Lian December 29, 2012 - 5:03 am	Law from 1962? Law from 1974? Law from British time? Law from Ne Win? Law from Than Shwe? Come on! We need law drafted by real elected representatives.
Reply	တခြားဖတ်စရာများ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး လှုပ်ရှားသူ ကိုထင်ကျော် ထပ်မံ ဖမ်းဆီးခံရ
ဟတ်ကြီး ရေကာတာ စီမံကိန်း လေ့လာခွင့်ပြုရေး KNU အစီအစဉ် ရှိ
ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်များ၏ နောက်ကွယ်တွင် ကြိုးကိုင်သူများရှိဟု ဆို
ကျောင်းအပ်ချိန် လာဘ်စားမှုနှင့် ကျောင်းကျူရှင်ကိစ္စ မိဘက မတိုင်လျှင် အရေးယူရန်ခက်
မြွေတောင် ဖားတောင်စီမံကိန်း ယာယီဆိုင်းငံ့ရန် ချင်းဒေသခံများ တောင်းဆို
ရန်ကုန်-မန္တလေး အဝေးပြေးလမ်းနှင့် လေဆိပ် ပြင်ဆင်ရေး အမေရိကန် ကူမည်
ရခိုင်ဒေသ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း နာလန်မထူသေး
ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား စုံစမ်းမှုရလဒ် လာမည့် လွှတ်တော်တွင် တင်ပြမည်